အူတက်ရယ်နေရလောက်အောင် ဝါရင့်လူရွှင်တော်တွေနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေးတင်လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ မသိသူမရှိလောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင် စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး အလှူတန်း ရက်ရောသူလေး ဖြစ်ပါတယ်… ။ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကနေ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးက အခုဆိုရင် အားလုံးရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံထားရပြီ ဖြစ်ပါတယ်… ။
မိဘအပေါ်မှာ သိတတ်လိမ္မာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက တစ်နေ့တစ်ခြားပိုမိုအောင်မြင်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ။သူမရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို လိုအပ်သူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းလေ့ရှိသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်….။ အခုလည်း အူတက်ရယ်နေရလောက်အောင် ဝါရင့်လူရွှင်တော်တွေနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းဗီဒီယိုလေးကို အမှတ်တရ ဖော်ပြထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်….။
ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး ရယ်နေရသလို အကုန်လုံးချစ်စရာကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်….။cele zone ပရိသတ်ကြီးတွက် ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…..။ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့်အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရှိပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်….။
ကိုက်နေတာတွေ သက်သာဖို့ဖြူဖြူဒို့ မိသားစုလို သွားကြစို့ ???????????????Taw Win Aung Mingalar Veneer and Specialist Dental Clinic – သွားဆေးခန်း
Posted by Phyu Phyu Htwe on Tuesday, 21 July 2020
သားလေးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆံပင်ညှပ်ပေးနေတဲ့ ဖေဖေနိုင်းနိုင်း